Otu esi etinye ụlọ ọrụ gị dịka onye na -arụkọ ọrụ na ụlọ ahịa shopify gị | Martech Zone
Otu esi etinye ụlọ ọrụ gị dịka onye na -arụkọ ọrụ na ụlọ ahịa shopify gị
Tuesday, August 3, 2021 Tuesday, August 3, 2021 Douglas Karr
Enyela ụlọ ọrụ gị nzere nbanye gị na nyiwe gị. Enwere ọtụtụ ihe nwere ike imehie mgbe ị na -eme nke a - site na okwuntughe furu efu iji nweta ozi ha ekwesịghị inwe. Ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ikpo okwu ugbu a nwere ụzọ isi tinye ndị ọrụ ma ọ bụ ndị na -emekọ ihe na ikpo okwu gị ka ha nwee ike pere mpe ma enwere ike wepu ya ozugbo emechara ọrụ.
Shopify na -eme nke a nke ọma, site na ya ohere onye mmekọ maka ndị mmekọ. Uru ndị na -emekọ ihe ọnụ bụ na ha anaghị etinye ọnụ ọgụgụ ndị ọrụ ikikere na ụlọ ahịa Shopify gị, ma.
Ntọala nnweta nnweta nnweta ụlọ ahịa
Na ndabara, onye ọ bụla nwere ike ịrịọ ohere ka ọ bụrụ onye ọrụ na saịtị Shopify gị. Nke a bụ otu esi elele ntọala gị.
Na-agagharị na Settings.
Na-agagharị na Ndị ọrụ na Ikikere.
Ebe ị ga -ahụ a Ndị na-emekọ ihe ọnụ ngalaba. Ntọala ndabara bụ na onye ọ bụla nwere ike izipu arịrịọ onye ọrụ. Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịmachi onye na -arịọ ohere onye mmekọ, ị nwekwara ike ịtọ koodu arịrịọ dị ka nhọrọ.
Nke ahụ bụ naanị ya! Echekwala ụlọ ahịa ụlọ ahịa gị ka ọ nata arịrịọ ndị mmekọ site n'aka ụlọ ọrụ gị nke nwere ike na -arụ ọrụ na ọdịnaya, isiokwu, okirikiri nhọrọ ukwuu, ozi ngwaahịa, ma ọ bụ ọbụna njikọta.
Shopify Ndị mmekọ
Ekwesịrị ịhazi ụlọ ọrụ gị ka ọ bụrụ onye nrụpụta Shopify Onye Mmekọ mgbe ahụ ha na -arịọ ohere onye ọrụ site na ịbanye na URL ụlọ ahịa Shopify (n'ime) gị na ikike niile ha chọrọ:
Ozugbo ụlọ ọrụ gị zipụrụ arịrịọ onye ọrụ ha, ị ga -enweta ozi -e ebe ị nwere ike inyocha ma nye ha ikikere. Ozugbo ị kwadoro ohere ụlọ ahịa ahụ, ha nwere ike banye ọrụ!
Tags: nnweta ụlọ ọrụonye oru mmekoritanzereụlọ ahịaShopify onye mmekoritaZụọ onye mmekọZụọ ndị mmekọShopify onye ọrụZụọ ikikere onye ọrụZụọ ndị ọrụikikere onye ọrụ
Jiri akwụkwọ mmado akwụkwọ mmado were were akwụkwọ mmado were were were were were were were were mee ihe mee ihe mee ihe mee ihe mee ha mee ihe
WordPress: Wepụ ma degharịa Ọdịdị PYMY/MM/DD Permalink na Regex na ọkwa Math SEO.